छानविनमा विज्ञता नै नभएकाहरुले आशा सिंहलाई दिए सफाइ « Bikas Times
छानविनमा विज्ञता नै नभएकाहरुले आशा सिंहलाई दिए सफाइ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी अस्पतालकी प्रमुख एआइजी डा. आशा सिंहमाथि लागेको आर्थिक अनियमितताको आरोपमाथि छानविन गर्न गठित समितिले कुनै कैफियत नभेटिएको निष्कर्ष निकालेको छ । रोचक के छ भने आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी छानविन गर्न गठित समितिमा लेखाका विज्ञ थिएनन् भने मेडिकल उपकरणसम्बन्धमा पनि छानविन गर्नु पर्ने थियो तर समितिमा एक जना पनि बायोमेडिकल इन्जिनियर राखिएको थिएन ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले एआइजी विश्वराज पोख्रेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति बनाएर कात्तिकको पहिलो साता नेपाल प्रहरी अस्पताल पठाएको थियो । समितिमा डिआइजी वसन्त लामा, एसएसपीहरु पुजा सिंह र भिम ढकाल, डिएसपी ज्ञानेन्द्र बस्नेत थिए ।
समितिमा भएकी पुजा सिंह र आशा सिंह नातेदार पनि हुन् । यी मध्ये कोही पनि लेखाका विज्ञ वा बायोमेडिकल इञ्जिनियर होइनन् ।
प्रमुख सिंहविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा औषधिजन्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको, कम आवश्यक उपकरणकालागि करोडौं खर्चेको, सेकेन्ड ह्यान्ड पिसिआर मेसिन खरिद गरि नयाँ किनेको बिल तयार पारेको, अनुशासनका नाममा कुनै एक वर्गका कर्मचारीहरुलाई मात्रै कारबाही गरेको जस्ता विषयमा छानविन गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
अख्तियार आफैंले यो मामिलामा अनुसन्धान नगरेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दियो । स्रोत भन्छ ‘आन्तरिक अनुसन्धान विभिन्न कारणहरुले प्रभावित हुन सक्छ भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको देखिन्छ । एउटै संगठन भएपछि अनुसन्धान गर्ने र गरिनुपर्ने पात्रहरु आपसमा सम्बन्धित हुन सक्छन् । केही बीच राम्रो मित्रता वा शत्रूता पनि हुन सक्छ । यस्तो सम्बन्धले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्छ भनेर अख्तिायरमा उजुरी परेको होला । तर अख्तियारले नै लाचारी देखायो ।’
अझै अनौठो त के भयो छानविनमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि राखिएन । छानविन टोली सन्तुलित बनाउन पनि यो आवश्यक थियो ।
अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी बोकेको अख्तियार आफैं पन्छिएपछि प्रहरी अस्पतालमा भएको भनिएको अनयिमितताको मामिला सहजै किनार लागेको छ ।
एआइजी विश्वराज पोख्रेलको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘कुनै अनियमितता नभएको तर अस्पतालभित्रको दुई गुटले आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गरेको’ भन्ने शैलीमा निष्कर्ष निकालेको छ ।
नपाएका उपाधि/पदक लगाउँदै फोटो खिचाउँदै
संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा कामै नगरे पनि मिसनमा गएकाहरुले पाउने पदक लगाएर फोटो खिचाएको भनेर अस्पतालकी प्रमुख आशा सिंहबारे प्रश्न उठेको थियो । अहिले उनको विषयमा थप विवाद उत्पन्न भएको छ । विवाद हो – सिंहले दुर्गममा सेवा गरेकाहरुले पाउने पदक पनि लगाउने गरेकी छिन् । यथार्थमा उनले दुर्गम क्षेत्रमा गएर जनताको सेवा कहिल्यै गरेकी छैनन् ।
तल दिइएको तस्बीरमा छातीको बायाँ तर्फको कालो सेतो धर्साले दुर्गममा सेवा गरेबापत पाइने पदकलाई जनाउँछ । प्रमुख सिंहले यो पदक पाएको भनेर चिन्ह लगाउँछिन् । तर उनले यस्तो कुनै सम्मान, पदक पाएकी छैनन्।
मुलुकमा राजसंस्था हुँदा दिइने विभिन्न खाले पदक, विभूषण अलंकार मध्येको गोरखा दक्षिण बाहु एक प्रतिष्ठित विभूषण मान्ने गरिन्थ्यो । डा. आशा सिंहले गोरखा दक्षिण बाहु पाएकी हुँ भन्दै पदक जनाउने चिन्ह लगाएर हिँड्ने गर्छिन् ।
तलको तस्बरको बायाँ तर्फको रातो धर्साले गोरखा दक्षिण बाहु प्राप्त गरेको जनाउँछ । जानकार स्रोत भन्छ – ‘सेवाको सुरुवातदेखि नै म उहाँलाई चिन्दछु । उहाँको सेवा पदक सम्मान र सबैबारे जानकार छु । गोरखा दक्षिण बाहु प्राप्त गर्नु भएको कुरामा मलाई विश्वास छैन ।’
कुन धर्साले के जनाउँछ ?
रातो मात्रैले –गोरखा दक्षिण बाहु
रातो र सेतोले –राजा वीरेन्द्रको गद्यी आरोहण रजत महोत्सव पदक
कालो–सेतो–कालो– दूर्गम पदक
हरियो–सेतो –हरियो–सेतो– युएन पदक (सिंहले यसलाई वीरेन्द्र –ऐश्वर्य पदक भन्ने गर्छिन्)
रातो –कालो – सेवा अवधि १२ वर्ष पूरा भएपछि पाउने ।
अस्पतालका छाला रोग विशेषज्ञहरु डा. विजयराज भण्डारी र डा. सञ्जित घिमिरेलाई ‘लेजर मेसिन खरिद गर्न आवश्यक छ’ भनेर सिफारिस गर्न विवस बनाएर सो मेसिन खरिद गरिएको बताइएकोछ ।
सेकेन्ड ह्यान्ड पिसिआर मेसिन
कोभिड महामारीको बेला भारतबाट सेकेन्ड ह्यान्ड पिसिआर मेसिन ल्याइयो । प्रहरी अस्पतालमा स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति गर्ने एजेन्टले सेकेन्ड ह्यान्ड मेसिन दियो तर त्यसलाई नयाँ खरिद गरेको भनेर बील तयार पारियो । अनुदानको सामाग्रीलाई खरिद गरेको बनाइयो